Qoraa Buug uu ugu Magacdaray Maaraynta Mashaariicda ku soo bandhigay Muqdisho – Radio Muqdisho
Qoraa Buug uu ugu Magacdaray Maaraynta Mashaariicda ku soo bandhigay Muqdisho
Carafaat Cali Maxamed oo ah Qoraa Somaaliyeed ayaa Munaasabad lagu qabtay Magaalada Muqdisho kusoo bandhigay Buug uu diyaariyay oo ku qoran Luqadda Somaaliga, ,Buugkaasi oo ciwaankiisu yahay Maareeynta Mashaarciida.
Munaasabdda oo lagusoo bandhigayay Buugka ka hadlaya Maareynta Mashaariicda oo ay ka qeybgaleen qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxaa soo qaban qabaiyay Nadiga Aqriska ee Muqdisho.
Guddoomiyaha Naadiga Aqriska ee Muqdisho C/Fitaax Xuseen Sabriye ayaa sheegay inay qaban doonaan kulamo kale oo lagu dhiirigalinayo Qorayaasha ,isagoo dadka Somaaliyeedna kula taliyay inay noqdaan bulsho wax aqrisa.
Qoraaga Carafaat Cali Maxmed oo la hadlay Warbaahinta Qaranka ayaa xusay in Buugka uu qoray ee ciwaankiisu yahay Maareynta Mashaariicda uu ugu talagalay inay si fudud u fahmaan Ganacsatada Soomaaliyeed ee Doonaya inay Mashaariic sameystaan wadooyinka ay u mari karaan.
Mudooyinkii dambe ayaa waxaa soo badanayay Qorayaasha Soomaaliyeed ee Bulshada usoo bandhigaya Buugaagta ay qoreen,iyadoo dhamaadkii Bishii August ee Sanadkan Caasimadda Muqdisho lagu qabtay Carwada Caalamiga ah ee Buugaagta Muqdisho oo lagusoo bandhigay Buugaag fara badan oo ku qoran Luqadda Somaaliga.
Ganacsato Hindi ah oo Tagay Dhulbeereedkii qasabka iyo Warshaddii Sokorta Jowhar